Karaiba: Veloma Farany, Nelson Mandela · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Desambra 2013 10:36 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Swahili, English
Tsy toy ny hoe tsy niomana tamin'ny vaovao momba ny fahafatesan'i Nelson Mandela ireo mpisera anaty aterineto eran-tany na Karibeana. Na izany na tsy izany dia efa 95 taona no sady efa narefo ara-pahasalamana ilay filoha teo aloha tao Afrika Atsimo sady mpikatroka nafàna fo niady tamin'ny fanavakavaham-bolonkoditra (apartheid), naiditra hopitaly efa im-betsaka tamin'ity taona ity noho ny aretina niverimberina nahazo ny taovam-pisefoany. Kanefa, ny fanambaràna, rehefa nambara ny alim-ben'ny omaly, dia tena nandona mafy tokoa. Nizara ny eritreriny ireo bilaogera any amin'ny faritra sy ireo mpampiasa ny media sosialy, mikasika ny fahalasanan'ilay olona iray endrika maharitry ny fanoherana am-pilaminana teto amin'izao tontolo izao.
Bilaogera, ny ampahany betsaka, toa tsy nahitàn-teny – na farafaharatsiny aloha amin'izao fotoana izao fotsiny – mionona amin'ny fizaràna tatitra avy amin'ny vaovao na fitanisàna ireo fanambaràna ofisialy mikasika ny fahalasanan'i Mandela. Naverin'ny Gazetin'ny Fampielezankevitra ao Guyana ireo fintina nataon'ny Filoha Jacob Zuma ho an'ny vahoaka tao Afrika Atsimo, niaraka tamin'ny fampahatsiahivana fohy ny fiaimpiainan'i Mandela, raha ny “The Bajan Reporter” kosa nampakatra fanomezam-boninahitra ho an'ilay filoha teo aloha avy amin'ny Sekretera Jeneraly fahiny tao amin'ny Vondron'ny Tany Miteny Anglisy, Sir Shridath Ramphal.
Nifidy ny hizara ny fihetsehampony tao amin'ny Facebook sy Twitter ny ankamaroan'ireo Karibeana mpisera anaty aterineto. Raynier Maharaj, mpanao hazety sady mpikambana ao amin'ny Trinidadiana monina any ivelany, naneho hevitra toy izao tao amin'ny Facebook :
OK, raha tahaka ny hoe miaina sy manome toerana manokana ny fahalasanan'i Mendela aho, dia satria midika zavatra betsaka ho ahy izany. Tamin'ireo ‘olo-malaza’ rehetra nifanena tamiko nandritra ny androm-piainako — ka isan'izany ny Mpanjakavavy sy i Dalai Lama — fotoana iray goavana niavaka indrindra teo amin'ny fiainako ny nihaonako tamin'i Nelson Mandela. Izy no ohatra velon'ny fahamendrehana sy ny fahatsorana.
Teratany iray hafa avy ao Trinidad ary mpanao gazety, Vernon O'Reilly Ramesar, nanamarika hoe :
Vavolombelon'ny lanjany fa na dia ny media Amerikana aza dia nanapaka ny fandaharany mba hilazàna ny fahalasanan'i Nelson Mandela
Skye Hernandez, mpampiasa Facebook dia nalahelo mafy nandre ny fahafatesany :
Nahatsiaro nalahelo hafahafa izany aho nandre ny vaovao milaza ny fahalasanan'i Madiba. Ela ny ela ka lasa hiala sasatra ihany izy ary azo antoka fa zavatra tsara izay. Saingy tena manainga fanahy ny tantarany sy Afrika Atsimo, mifilofilo indraindray, fa mahazandana hatrany. Niaraka tamintsika hatrany izy nandritra ny androm-piainantsika. Soava dia, Nelson Mandela
Franz Gillezeau dia nanisi-kevitra ny olona :
Mitomania ilay lehilahy, saingy tsarovy ny mankalaza ilay maherifo fitadidy
Rakotr'ireo tahirin-tsary vao nakarina mitantara ny fitsidiham-paritra nataon'i Mendela koa ny Facebook – ity iray ity, nahazoana alàlana avy amin'ny Sampana Fampahalalam-Baovao ao Jamaika, dia ny fitsidihany ny nosy tany ampiandohan'ny 1990 tany, ary iity iray ity, avy amin'i Amber Media Productions, nitsidihany an'i Trinidad sy Tobago tamin'ny 2004
Ao amin'ny flickr, Georgia Popplewell nampakatra sarin'i Mendela, amin'ny fanamarihana hoe :
Atahorako ho mbola ho ela vao hahita mpitarika iray manana toetra toa azy isika. Veloma mandrakizay ry Madiba Tsy Foy. #Mandela
Nelson Mandela;sary an'i caribbeanfreephoto
Kanefa , tsy ny rehetra no miombon-kevitra amin'ity fanambaràna ity. Manerana ny bilaogin'ny babalu an'ireo kiobàna any ampielezana, nanoratra i drillanwr hoe:
Ho tsaran'ny tantara ny fiainany, azo antoka izay.
Na dia takatro sy hajaiko aza ny tolon'i Nelson Mandela sy ny naha-gadra politika azy tao amin'ny firenena niaviany ihany nandritra ny fotoana lavabe teo amin'ny fiainany, tsy nandalo fotsiny tamiko ny fotokevitra politikany taorian'ny nivoahany ny fonja ary ireo firahalahiana rehetra nasehony niaraka tamin'ny sasany amin'ireo mpitondra faran'izay ratsy indrindra teto amin'izao tontolo izao.
Anaty lahatsoratra iray fanarahana ny zava-misy ao amin'io bilaogy io ihany, nanisi-kevitra i Carlos Eire hoe :
Avy amin'ny fankalazana azy manerana ny tontolo ny fahamasinan'i Mandela, indrindra fa ny Kiobàna. Rehefa nanokan-tena ho aminà tolona iray mendrika sy marina izy – namàrana ny fanavakavahana ny Afrikana mainty tao Afrika Atsimo – tsy nanohitra velively ny fampiasana herisetra mba ho fitaovana hanatanterahana ny tolony izy. Mbola ratsy noho izany aza, tsy nanao afa-tsy ny nidera an'i Fidel Castro izy ary ny fanavakavahany ara-piaviana nankarary saina, ary tsy nitsahatra velively ny nihira fiderana ho an'i Fidel
Anaty fifandonam-pijery manaitra, nizara ity fomba fijery ity i Capitol Hill Cubans :
Efa tsy hita vatana eto anivontsika intsony i Nelson Mandela, saingy ny lova navelany ho amin'ny fanaovana sorona ny tena, faharetana ary fahalalahna dia haharitra mandrakizay.
Na dia teo aza ny fandraisany ny herisetra nandritra ny fotoana voalohany naha-mpikatroka mafàna fo azy, ny zotram-piainan'i Mandela dia mampiseho ny herim-panovàn'ny hetsika am-pilaminana, tsy fankatoavana sivily.
Fampahatsiahivana ihany koa ny soron'ireo gadra politika manan-tantara eto amin'izao tontolo izao ny fahalasanany, toa an'i Eusebio Penalver Mazorra tao Kiobà, ilay gadra politika nanam-piaviana Afrikana nifonja ela indrindra tato anatin'ny vanin'andro maoderina, nandany 28 taona. Indrisy, nodimandry i Penalver tamin'ny 2006, tsy mba nahita akory ny tany niaviana lalainy.
Miaraka amin'ilay mpitarika Tcheque fahiny, Vaclav Havel, Mandela no solotena farany mampiseho ireo gadra politka noafahana ary voafidy ho mpitondra tamin'ny fomba malalaka. Avy any Kiobà ka hatrany Korea Avaratra, mitondra fanantenana tsy manam-pahataperana ho an'ireo hetaheta demaokratikan'ny mpanohitra, ny gadra politika ary ireo mpikatroka mafàna fo manerana ny tany ny fiainana mahagaga nolalovany.
Mandria am-piadanana sy an-kalalahana.
Ireo mpampiasa Twitter – manerana ny tany – dia mampiasa ity tenifototra ity #mandela #death mba hanolorana ny fiaraha-miory avy amin-dry zareo. Ny tontolon'ny bilaogy karibeana dia tsy hisalasalàna fa hanan-javatra betsaka holazaina m,ikasika an'i Nelson Mandela sy ny lova napetrany vantany vao latsaka lalina ao anaty ny fahafatesany; hanome fanavaozam-baovao mifandraika amin'izany ny tarika GV Karibeana.
Avy amin'ny caribbeanfreephoto ny sary miasa ato anatin'ity lahatsoratra ity, nampiasàna ny lisansa Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic Creative Commons. Tsidiho ny tahirintsary mifandimbin'ny caribbeanfreephoto